Mofon’aina – TALATA 24 OKTOBRA 2017 – Athis Fanantenana
Mofon’aina – TALATA 24 OKTOBRA 2017
20 Ary raha mbola niteny sy nivavaka sy niaiky ny fahotako mbamin’ ny fahotan’ ny Isiraely fireneko aho ka nandoatra ny fifonako teo anatrehan’ i Jehovah Andriamanitro ho an’ ny tendrombohitra masin’ Andriamanitro,21 eny, raha mbola niteny nivavaka aho, dia, indro, ilay lehilahy Gabriela izay hitako tamin’ ny fahitana voalohany, dia nampanidinina faingana ka nanatona ahy tokony ho tamin’ ny fotoan’ ny fanatitra hariva.22 Ary izy nampahalala ahy sy niresaka tamiko ka nanao hoe: Ry Daniela ô, avy hampahazava saina anao aho.23 Tamin’ ny niantombohan’ ny fivavakao dia nisy teny nivoaka, ka dia tonga hanambara aminao aho, satria malala indrindra ianao; koa diniho ny teny, ary aoka ho fantatrao ny fahitana.
DANIELA 9 :20-23
MIVAVAHA HO ANAO SY NY FIRENENAO
1-Mibebaha ho anao sy ny firenenao
Mivavaha ho azy sy ny firenen’Israely i Daniela. Mitondra ny fahotan’ny tenany eo anatrehan’ Andriamanitra i Daniela , tahaka ny ataon’ny mpisoronabe, aorian’izay vao mifona ho an’ny fireneny (jereo Heb 7 :27) . Mahazatra ny maro ny mifona sy mibebaka ho an’ny fireneny fa adino sy tsy tsaroany ny mivavaka sy mibebaka ho an’ny tenany .Amin’ny faharavana sy ny fahapotehan’ny firenena dia tomponandraikitra amin’izany ny mpitarika sy ny mpino tsirairay . Loarina hatrany anaty ny fifonana eo anatrehan’i Jehovah (and 20).Mandiniha mba tsy hamerenana ny hadisoana sy ny fahotana intsony rehefa mibebaka marina.
2-Mampahalala ny sitrapony Andriamanitra
Maniraka ny anjely Gabriela na ilay maherin’ Andriamanitra i Jehovah. Ny anjely dia iraka no heviny , ka miasa araka ny Testamenta taloha , hitondra ny hafatr’ Andriamanitra amin’ny olona sy ny mpanompony . Tamin’ny fotoana fivavahana fanaovana fanatitra no nitenenany tamin’i Daniela ny hevitry ny fahitana sy nanazavana ny sainy (and 21-22). Maniraka ny anjeliny Andriamanitra hanambara ny fahamarinanya sy ny fitiavany satria « malala indrindra ianao » (and 22). Andriamanitra manazava ny sitrapony sy ny faminaniana amin’ny malalany . Mivavaha amin’ny fotoana efa natokana ho fihaonana amin’ny Tompo.
Ahoana no fomba itenanan’ny Tompo amin’ny mpino ?
Mofon'aina - ZOMA 20…